असार १७, २०७४
चिया बगानमा फुलेको नेपाली राष्ट्रवाद
‘यदि नेपालको सरकारी वा प्रशासनिक वा शैक्षिक भाषा तामाङ भएको भए तपाईंहरूले के–कस्तो समस्या भोग्नुपर्ने होला ? स्कुल–कलेजदेखि प्रहरी प्रशासन, अदालत, रोजगार, श्रमबजारमा कस्तो व्यवधान झेल्नुपर्ने होला ? एक मिनेट ठन्डा दिमागले सोच्नुहोला ।’
जो सपना बोकेर फर्किए
जीवन गन्तव्यको मात्रै कथा होइन । यात्राका अनगिन्ती मोड र भंगालाहरूले बगाएर अन्यत्रै पुर्‍याउने यात्रीहरूको ‘मेमोयर’ हो । एउटा टाकुरोका लागि हिँडेको यात्री जब अर्कै टाकुरोको फेदीमा आइपुग्छ, अनि जीवनको असली परीक्षा सुरु हुन्छ— पर्वत चढेर पार हुने कि फर्केर पुरानै ठाउँमा जाने ?
अफगानिस्तान क्रिकेटको प्रसङ्ग आउनेबित्तिकै श्रीनिवास राणा अहिले पनि त्यही दिन सम्झिन्छन्, जुन दिन अफगानिस्तानले नेपालसँग पहिलोपटक खेल्दै थियो । सन् २००४ को एसीसी ट्रफी अफगान क्रिकेटको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता थियो । त्यही पाँचौं स्थानको प्लेअफमा स्थान पाउन अफगानिस्तानको भेट नेपालसँग हुँदै थियो ।
बोर्ड अफ कन्ट्रोल फर क्रिकेट इन इन्डिया (बीसीसीआई) विश्व खेलकुदमा औंलामा गणना गरिने धनाढ्य संस्था मानिन्छ । उसले दस वर्षअघि सुरु गरेको घरेलु प्रतियोगिता हो— इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) ।
सफल यथार्थवादी सिनेमा
एउटै देश भारतले सन् २०१६ मा २ हजार ३ सय ३६ फिचर फिल्महरू बनायो । ठूलो बजेट, प्रस्तुति र प्रतिभाले भारतीय फिल्म उद्योग बलिउडलाई भीमकाय बनाएको छ ।
वाम राजनीतिको शल्यक्रिया
२०७३ चैतमा प्रकाशित भएको रेशम विरहीको उपन्यास ‘प्रेमदासको डायरी’ नेपाली साहित्यजगत्को नवीन हो ।
चियाको आविष्कार पाँच हजार वर्षअगाडि चीनमा भएको हो । संसारमा सबैभन्दा धैरै चिया चीनमा उत्पादन हुन्छ र सबैभन्दा बढी चिया पनि चीनमै खपत हुन्छ ।
माथि हरियो जंगल, गाउँको पुछारमा सम्म परेको खेतबारी ।
दिल्लीमा नेपाली कविता
अनपेक्षित रूपले नयाँ दिल्लीबाट फोन आयो । फोन गर्ने कृष्ण शर्मा रहेछन्, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी । प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा आफ्नो कार्यालयको व्यस्तताबीच मैले उनीबाट सुनें— मे २२ तारिखमा नयाँ दिल्लीस्थित साउथ एसियन युनिर्भसिटीमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कविता महोत्सव हुँदै छ, त्यसमा कि–नोट दिन आमन्त्रण छ ।
सल्लो पनि मंगोलियन र आर्यन ? वाहियात भन्न लाग्छ । खासमा, सामान्य दृश्य घटनाले यो प्रसंग जन्मिएको हो ।
‘एन्टिथेसिस नै हो देखाउन खोजेको’
नेपाली समाजका ज्वलन्त समस्याहरू चिन्ने, बुझ्ने, पर्गेल्ने र यो समाजलाई बदल्ने भाष्यको खोजी गर्ने पुस्तक हो– माङ्गेना : नेपाल मन्थन ।
‘नेपालीपनको अनुहार कोर्ने प्रयास’
धेरै कुराहरू छुटे । अरूले लेख्दैनन् । लेखेको भए हुन्थ्यो । लेख्दे गयो भने भने डकुमेन्टेसन हुन्छ भनेर प्रयास गरेको हुँ ।
तपाईं कहाँनेर उभिने ?
सामान्यतया पुरुष पितृसत्ताको कारिन्दा हो । हेर्दा कार्यकारी देखिए पनि पुरुषसमेत यो सत्ताको जालोबाट मुक्त छैन । पितृसत्ता खासमा पुरुषविशेषको मात्र सत्ता होइन, पुलिंगकेन्द्री पारिवारिक र सांस्कृतिक राजनीतिको सत्ता हो ।